တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၄
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. Ms. Retno L.P Marsudi အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များ၏ ပကတိအခြေအနေမှန်များကို ဦးစွာရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးတို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွင် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးတို့ သည် အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ၀နျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ စကျတငျဘာ ၄
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ၀နျကွီး H.E. Ms. Retno L.P Marsudi အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေတှငျ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ ၂၅ ရကျနမှေ့ စတငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ARSA အစှနျးရောကျဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျမှု ဖွဈစဉျမြား၏ ပကတိအခွအေနမှေနျမြားကို ဦးစှာရှငျးလငျးဆှေးနှေးသညျ။ ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးတို့သညျ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စတှငျ လူသားခငျြးစာနာ ထောကျထားမှု အကူအညီပေးရေးကိစ်စရပျမြားအား အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ၀နျကွီးတို့ သညျ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအားလုံး၊ ပြည်သူအားလုံးက မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်အ၀ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Tachikawa တပ်စခန်းသို့လေ့လာ၊ Jindaiji ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာဖူးမြောကြည်ညို ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr.Taro Kono နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(ရုပ်သံသတင်း)
အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ရုံး/ဌာန မိသားစုများ၏ အဋ္ဌမအကြိမ် စုပေါင်းမဟာ ဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ သာယာဝှမ်းကျေးရွာ၌ ကျင်းပ
နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှတို့သည် ပြင်ဦးလွင်တပ်နယ်ရှိ သင်တန်းကျောင်းများနှင့်တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့များ၏ မိသားစုရေသဘင်မဏ္ဍပ်များ၌ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ဗိုလ်လောင်းများ၏ ပျော်ရွှင်စွာရေသဘင်ပွဲတော်ဆင်နွှဲနေမှုများကို လိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး ဗိုလ်လောင်းများနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများအား အတာရေများပက်ဖျန်းပေး
ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၈ Admin 0